Sergey Narubin - रूसी फुटबल गोल रक्षक। खेल को मास्टर को शीर्षक को होल्डर, प्रसिद्ध सोभियत खेलाडी छोरा, भलिबल खेलाडी व्लादिमीर Narubina। मास्को "डायनेमो" को पक्षमा वर्तमान समयमा।
प्रारम्भिक आफ्नो क्यारियर मा
1981 मा, त्यो मास्को, सर्गेई Narubin मा जन्म भएको थियो। उहाँले स्कूल खेल, "श्रम रिजर्व" को एक स्नातक छ। आफ्नो पहिलो व्यावसायिक क्लब 2000 मा Ramenskoye "स्याटर्न" थियो, तर व्यावसायिक टीम को debut, उहाँले असफल भयो।
2001 मा Narubin टोलीमा, "उल्का" Zhukovsky देखि लागि अवैतनिक लिगमा आफ्नो क्यारियर जारी राखे। 30 लक्ष्य छुटेका जो 26 खेल, प्ले।
2002 मा उनले दोस्रो विभाजन मा आफ्नो क्यारियर जारी राखे। पहिलो टोली Bronnitsy देखि "Fabus"। मौसम भर, सर्गेई Narubin 38 खेल हराइरहेको 46 लक्ष्य, प्रतिस्थापन बिना आयोजित। मास्को टोली,5WINS को कुल जित्यो को अंत सित स्थान जित्यो र हराएको व्यावसायिक स्थिति।
त्यसपछि, दुई वर्ष Narubin ब्रियान्स्क "डायनेमो" मा बिताए। उहाँले 67 खेलहरूमा 68 गोल conceding, एक सन्तोषजनक खेल टोलीमा देखाए। र 2004 मा उनले पहिलो प्रभाग मा आयोजित। че на кубок России. 2005 भ्लाडिकाभकाज एक भाग थियो, "Alanya", को प्रिमियर लिग मा competed, तर क्षेत्र मा त्यहाँ एक पटक मात्र रूस को कप लागि चटाई Che थियो। निम्न वर्ष उहाँले ब्रियान्स्क फर्के।
2007 मा, सर्गेई Narubin रूपमा7लगातार मौसम धेरै यो टोलीको खर्च, को Permian "Amkar" सारियो। को प्रस्थान पछि Vladimira Gabulova महानगरीय "डायनेमो" खेलाडी पहिलो टोलीमा स्थान लियो। उहाँले ", लोकोमोटिव" "शून्य मा" बचाव को मास्को विरुद्ध खेल मा प्रिमियर लिग आफ्नो debut गरे। आफ्नो पहिलो सिजन मा Narubin एकल लक्ष्य conceding बिना प्रदर्शन 16 खेल को 11 मा अति-विश्वसनीय खेल।
इगोर Usminsky संग अर्को दुई मौसम मुख्य गोल रक्षक सर्गेई Narubin थियो। "Amkar" सफलता बदलिने संग प्ले। तर, खेलाडी नियमित रूपमा पर्म क्षेत्रमा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी मतदान छ।
कुल, टोलीमा को गोल रक्षक को 165 लक्ष्य छुटेका जसमा 132 खेल बिताए।
Narubin मा उच्चतम उपलब्धि रूस को कप को एक finalist बनेर 2008 आफ्नो क्यारियर मा हासिल। टोलीमा बेलग्रेड "रोटर" विरुद्ध 1/16 अन्तिम टाढा मा एक विश्वस्त जीत सुरु - 4: 1। त्यसपछि घर मा जित्यो 3: 1 ग्रोजनी "Terek", र मा 1/4 अन्तिम एफसी "मास्को" भन्दा प्रबल - 2: 1।
को अर्ध-फाइनलमा, "Amkar" भेट एकाटेरिनबर्ग "यूराल" र हठी मिलान सफल - 1: 0।
को निर्णायक बैठक CSKA विरुद्ध मास्को मा भयो, तर यो Narubin चोट कारण छुट्यो। यो गेट Gabulov मा स्थान लियो। एक मा समाप्त नियमित समय2आकर्षित: 2, र पेनाल्टी मा, "CSKA" जित्यो 4: 1।
आज खेल Narubina
पत्रुस Narubin "ऊफा" एफसी हस्तान्तरण अन्तर्गत देखि टीम, "Tosno" मा छोटो समय बिताएपछि। तर, यो टोली छैन लामो रहन सक्षम थियो। 11 लक्ष्य छुटेका जो प्रिमियर लिग, मात्र6खेल, मा बिताए।
2016 मा Narubin महानगरीय "डायनेमो" गर्न, प्रिमियर लिग को पूर्वसन्ध्या मा भागे छ सारियो। को "सेतो-नीलो" को अगाडि नयाँ सिजन मा राष्ट्रिय फुटबल को कुलीन फर्कन कार्य थियो, तर कारण वित्तीय समस्याका थुप्रै विशेषज्ञहरु तिनीहरूले सफल हुनेछ शङ्का। खेल Muscovites सिद्धान्त धेरै विश्वस्त प्ले हुनत, पहिलो प्रभाग प्रमुख।
आज टोलीमा मुख्य गोल रक्षक Anton Shunin छ। 36 वर्षीया Narubin मात्र आफ्नो जगेडा रूपमा कार्य। 2016 मौसमको सुरुवातमा भएकोले Sergey क्षेत्रमा खर्च, लक्ष्य छुटेका छैनन् जो केवल एक खेल।
Shirokov रोमन: मार्ग "जेनिथ" - "क्रास्नोडार" - "स्पार्टाकस" - "क्रास्नोडार"
फुटबल खेलाडी Valery Reingold
ओलेक्जेंडर Rybka - जीवनी, मूल्यांकन, तथ्याङ्क
केविन डी Bruyne। सबैभन्दा होनहार बेल्जियम खेलाडीहरू एक को इतिहास
इटालियन स्ट्राइकर Cherchi Alessio
को पुरस्कार कर्मचारीहरु लागि नामांकन। इनामदायी कर्मचारीहरु लागि हँसिलो नामांकन
पुतली मयूर - उड्दै सौन्दर्य
ओपेरा र सफ्टब्याजबाट उपहारहरू वसन्तको लागि तयारी गर्नुहोस्
फालाफेल - यो के हो? फालाफेल: फोटो
Yubku- "घण्टी" कसरी सी गर्न? गरेको कदम चरण जाने
को माल्दिभ्स मा बिदाहरू - यसको सबै manifestations मा विदेशी
जागिर कसरी फेला पार्न, ठीक?
के भने कुनै स्पष्ट कारण लागि आफ्नो खुट्टा मा चोटपटक थिए
कसरी खट्टा क्रीममा सेतो मशरूम पकाउनुहोस्
ताले Mottura: सुविधाहरू, लाभ, मोडेल